Vaovao - Tonga tao amin'ny orinasanay ny birao siansa sy teknolojia ao amin'ny distrikan'i Huaian mba hitarika ny asa
Jeremy Guan, tale jeneralin'ny teknikan'ny fitsaboana ASN Huaian CO., LTD dia nanome ny tompon'andraikitra ao amin'ny Biraon'ny Teknolojia Distrikan'i Huai'an izay tonga tao amin'ny orinasanay mba hanaovana famotorana sy fikarohana ary noraisina tamim-pitiavana Tamin'ny 26 Aogositra. Ny mpitarika mifandraika amin'ny Birao Teknolojia dia nihaino ny fampidirana ny famokarana sy ny fampandrosoana ny orinasanay, nitsidika ny atrikasa famokarana orinasa ary nahalala bebe kokoa momba ny fanavaozana tsy miankina an'ny orinasa, ny fikarohana sy ny fampandrosoana siantifika, ny talenta fikarohana siantifika sns.
Rehefa avy nihaino ny toe-draharahan'ny orinasanay izahay dia nihaona tamin'ny mpitantana jeneralin'ny orinasanay Jeremy Guan sy olona tompon'andraikitra amin'ny sampan-draharaha mifandraika amin'ny orinasa mba hahatakarana ny olana sedrain'ny orinasanay amin'ny fanavaozana sy ny fampandrosoana ary inona ny serivisy hafa ilain'ny orinasa avy amin'ny governemanta, mba hahafahan'ny orinasa manatsara kokoa ny fahaizan'izy ireo manavao ny haitao sy mampiroborobo ny fivoaran'ny teknolojia.
Amin'ny anaran'ny orinasa, ny Jeneraly Jeneraly Jeremy dia nandray ireo mpitarika ny Birao Teknolojia Distrika ary nisaotra tamin'ny fanohanany matanjaka. Nilaza i Jeremy fa ny zava-bitan'ny ASN Medical anio dia tsy azo sarahina amin'ireo politika nisafidy an'ny firenena momba ny fandraharahana sy ny fanohanana ara-tsiansa ary ny teknolojia, ary koa ny fikarakarana maharitra sy ny fanampiana an'ireo departemantam-panjakana, manantena izy fa ny sampana governemanta amin'ny ambaratonga rehetra dia afaka manohana hatrany ny ASN. Nihalehibe sy nihanatanjaka hatrany ny fitsaboana, hanohy hiasa mafy izahay mba hanomezana anjara biriky lehibe kokoa amin'ny fanambinana ny toekarena eo an-toerana.
Ireo mpitarika ny Biraon'ny siansa sy ny teknolojia ao amin'ny distrika dia nanamafy tanteraka ny fivoaran'ny asa siantifika sy ny haitao an'ny orinasanay ary manantena fa ny ASN Medical dia afaka manao ezaka maharitra hanao tetik'asa maro kokoa ary hahazoana vokatra bebe kokoa.
Ireo olona tompon'andraikitra amin'ny departemanta mifandraika amin'ny orinasanay dia niaraka tamin'ny fitsidihana manontolo natao fanadihadiana.